अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत परिवर्तनको अर्थ - Karobar National Economic Daily
अर्थतन्त्रमा देखिएका संरचनागत परिवर्तनको अर्थ
query_builderMay 30, 2017 11:38 AM supervisor_accountगजेन्द्र बुढाथोकी visibility1092
विगत केही वर्षदेखि नेपालको अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन देखिन थालेको छ । लोकतन्त्र बहाली भएको वर्ष अर्थात् आठौं योजनाको आधार वर्षमा कृषिले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको करिब ४९ प्रतिशत हिस्सा कृषिक्षेत्रले ओगटेकोमा चालू आवमा कृषिको योगदान २९.३७ प्रतिशतमा झरेको छ ।
आव ०५९/६० देखि ०६३/६४ सम्मको पाँच वर्षमा ३४.४ प्रतिशतमा झरिसकेकोमा त्यो आव ०६९/७० देखि ०७३/७४ मा आइपुग्दा औसत ३१.४ प्रतिशतमा झरेको छ । उता गैरकृषिक्षेत्रको योगदान सोही अवधिमा ६५.७ प्रतिशतबाट बढेर ६८.६ प्रतिशतमा पुगेको छ । आठौं योजनामै कृषिमाथिको अधिक निर्भरता कम गर्ने लक्ष्य राखिए पनि यसको मूल आशय आर्थिक आधार विस्तार गर्ने थियो, औद्योगिक क्रियाकलाप विस्तार गर्दै अर्थतन्त्रलाई समृद्धिको अवस्थामा लैजाने योजना थियो । तर, त्यो लक्ष्यतर्फ हामी कहिल्यै उन्मुख हुन सकेनौं ।
पछिल्लो दशकको मात्र उद्योग क्षेत्रको योगदान हेर्ने हो भने निराशाजनक चित्र नै देखा पर्छ । आव ०६४÷६५ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उद्योग क्षेत्रको योगदान ७.३४ प्रतिशत रहेकोमा चालू आवमा यो घटेर ५.६७ प्रतिशतमा झरेको छ । उद्योग बढ्दा रोजगारी बढ्छ, आर्थिक क्रियाकलाप बढ्छ । यसबीचमा भारतबाट क्लिंकर ल्याएर यहाँ प्याकेजिङ गर्ने सिमेन्ट उद्योगहरूबाहेक वास्तविक हदमा औद्योगिक विस्तार हुनै सकेन ।
यहाँ भएका पुस्तैनी पुँजीपतिदेखि नवधनाढ्य÷नयाँ पुँजीपतिहरूले उद्योग स्थापना गरेर अर्थतन्त्रमा वास्तविक उत्पादकत्व सिर्जना गर्नुभन्दा भएका उद्योगहरू पनि बन्द गरेर नाफामूलक थोक तथा खुद्रा व्यापार र सेवाक्षेत्रका तात्कालिक लाभ सिर्जना गर्ने क्षेत्रमा मात्र बढी ध्यान केन्द्रित गरे ।
फलतः यतिखेर अर्थतन्त्रमा सेवाक्षेत्रको योगदान बढेर ६६ प्रतिशत पुग्यो । विगत १० वर्षको सेवाक्षेत्रको वृद्धिदर हेरौं । आव ०६४/६५ मा यसले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा ५१.५ प्रतिशत योगदान राख्ने गरेकोमा आव ०६७/६८ मा यो करिब ४८ प्रतिशतमा झरेको थियो भने गत आव ०७२/७३ मा ५४.२ प्रतिशतबाट यो वर्ष अझ बढ्दै ५५.९९ प्रतिशत पुगेको छ ।
विश्वव्यापी अर्थतन्त्रमै सेवाक्षेत्रको भूमिका र योगदान बढ्दो क्रममा रहेकाले नेपालमा पनि त्यसअनुरूप अर्थतन्त्रको संरचनामा परिवर्तन आउनु नौलो कुरा भएन । उत्तर कोरियाले जस्तो नेपाल विश्व अर्थतन्त्रको बहावबाट टाढा हुन सक्दैन । भलै अर्थतन्त्रको संरचनामा आएको परिवर्तनअनुसार राज्यले आर्थिक नीति निर्माण गर्न सकिरहेको छैन, त्यो बेग्लै कुरा हो ।
अर्थतन्त्रमा संरचनागत परिवर्तन आइरहँदा यसका छिटा–बाछिटाहरू आमनेपालीको जीवनयापन, जीवनशैलीमा पनि देखिन थालेको छ । सरकारको दाबी मान्ने हो भने विगत १० वर्षमा आमनेपालीको प्रतिव्यक्ति आय दोब्बर भएको छ ।
०६४/६५ मा ४ सय ९१ डलर रहेकोमा ०७३/७४ मा ८ सय ५३ डलर पुगेको छ, यो गत वर्ष ७ सय ४६ डलर थियो, त्यो भने अघिल्लो वर्षको ७ सय ६६ डलरबाट घटेको हो । लोकतन्त्र बहालीपछिको मात्र तथ्यांक हेर्दा हाम्रो प्रतिव्यक्ति आयको वृद्धिदर त्यस्तो उच्च नदेखिए पनि आशालाग्दो वृद्धि भने देख्न सकिन्छ ।
उदाहरणका लागि सन् १९८९ मा नेपालीहरूको प्रतिव्यक्ति आय १ सय ९६ अमेरिकी डलरमात्र रहेकोमा यो १९९१ मा आइपुग्दा फेरि १८४ डलरमा झरेको देखिन्छ । माओवादी विद्रोह चरम उत्कर्षमा रहेको सन् २००० मा आइपुग्दा २ सय ४७ डलर पुगेकोमा सन् २००६ को परिवर्तनताका ३ सय ५७ डलर पुग्यो । सन् २००७ मा ४ सय २७ डलरबाट उकालो लाग्दै सन् २०१० मा ६ सय १२ डलर पुगेको हो । यसको औसत वृद्धिदर सुरुका दशकमा २.५ प्रतिशतका हाराहारीमा रहेकोमा त्यसपछि औसतमा ४ प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ, जुन त्यति उत्साहजनक भने होइन ।
नेपाली रुपैयाँमा हेर्दा आव ०६४/६५ मा प्रतिव्यक्ति आय ३२ हजार २ सय ५७ रुपैयाँ रहेकोमा यो वर्ष ९१ हजार, ४ सय ८८ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ । गत वर्ष समग्र अर्थतन्त्र नै शून्य प्रतिशतको वृद्धिदरको अवस्थामा रहे पनि प्रतिव्यक्ति आय आव ०७१/७२ को ७७ हजार ४ सय २६ रुपैयाँबाट बढेर ८० हजार ५ सय २५ रुपैयाँ पुगेको देखिन्छ ।
अर्थतन्त्रको समग्र आकार नै बढेका कारण प्रतिव्यक्ति आय बढेको देखिनु अस्वाभाविक भने होइन । आव ०६४÷६५ मा देशको कुल गार्हस्थ्य उत्पादन (जीडीपी) को आकार (प्रचलित मूल्यमा) ८ खर्ब २४ अर्ब रुपैयाँबराबर मात्र रहेकोमा आव ०७३/७४ मा आइपुग्दा यो २६ खर्ब २७ अर्ब रुपैयाँबराबर पुगेको छ । आधारभूत मूल्यमा यथार्थ कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको अवस्था हेर्ने हो भने खासै उत्साहित हुनुपर्ने अवस्था छैन ।
आव ०६४/६५ मा यो केवल ५ खर्ब २२ अर्ब रुपैयाँबराबर रहेकोमा आव ०७३÷७४ मा ७ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँ मात्र पुगेको छ । विगत १० वर्षमा औसत आर्थिक वृद्धिदर केवल ४.२ प्रतिशत रह्यो ।
त्यसो त एकथरी अर्थशास्त्रीहरू (विशेषतः समातामूलक आर्थिक वृद्धिमा विश्वास गर्ने प्रो. अमत्र्य सेनसहितका अर्थशास्त्रीहरू) कुल राष्ट्रिय आयलाई कुल जनसंख्याले भाग गरेर निकालिने प्रतिव्यक्ति आयले वास्तविक आय नझल्काउने तर्क गरेका छन् ।
अर्थशास्त्री सेनले त अझ प्रतिव्यक्ति आयको परम्परागत गणना पद्धतिलाई नै परिवर्तन गर्नुपर्ने तर्क गरेका छन् । आर्थिक वृद्धिदर र जनताको समृद्धि स्तरबीचको प्रत्यक्ष अन्तरसम्बन्धको गणनालाई अहिलेको परिप्रेक्ष्यमा फरक ढंगमा हेरिनुपर्ने उनको तर्क छ ।
यसलाई नेपालको परिप्रेक्ष्यमा हेर्दा अझ सान्दर्भिक देखिन्छ । चालू आर्थिक वर्षमा प्रक्षेपित ६.९४ प्रतिशतको वृद्धिदरलाई नै हालसम्मको उच्च वृद्धिदर मानिएको छ । बुझ्नुपर्ने तथ्य भनेको यो यथार्थ वृद्धिदर होइन ।
भूकम्प र भारतीय नाकाबन्दीका कारण गत वर्ष शून्य प्रतिशत (वास्तविक ऋणात्मक) र दोहोरो अंकको मुद्रास्फीतिका कारण अडस्फीति (स्ट्यागफ्लेसन) को अवस्थामा रहेको अर्थतन्त्रको पुनर्बहाली मात्र हो । यसलाई स्वतन्त्र अर्थशास्त्रीहरूले समायोजित आर्थिक वृद्धिदर पनि भनेका छन्, किनकि अर्थतन्त्रमा वास्तविक मूल्य अभिवृद्धि सिर्जना भएको देखिँदैन ।
यसलाई तथ्यांकीय आधारमै हेरौं, कुल स्थिर लगानी जीडीपीको ३३ प्रतिशतमात्र पुगेको देखिन्छ भने कुल स्थिर लगानीमा सरकारी लगानी जीडीपीको ७.३ प्रतिशत मात्रै छ, जुन अर्थतन्त्र मन्द भएको वर्ष पनि ७.१ प्रतिशत मात्रै थियो । लगानी नै नभईकन कहाँबाट उत्पादकत्व बढ्यो ? कसैले भन्न सक्ने अवस्था छैन ।
सरकारले गत वर्षको तुलनामा यो वर्ष पुँजीगत खर्च १ सय १२ प्रतिशतले बढेको देखाएको छ । खर्चै नभएको (शून्य खर्च) अवस्थामा १ रुपैयाँ खर्च गरे पनि त्यो शतप्रतिशतले खर्च वृद्धि भएको देखिनु अस्वाभाविक होइन । यदि सरकारले खर्च गर्न सकेको भए नेपाल राष्ट्र बैंकको खातामा करिब ३ खर्ब रुपैयाँ निष्क्रिय रूपमा थन्केर बस्दैन थियो ।
चालू आर्थिक वर्षमा पुनर्निर्माणका लागि छुट्ट्याइएको बजेटसमेत जोडजाड पारेर पुँजीगत खर्च जीडीपीको १० प्रतिशत पुगेको देखाइएको छ । अर्कातिर चालू खर्च÷जीडीपी अनुपात २१ प्रतिशत पुगेको छ । यो तस्बिर आउँदो आर्थिक वर्षदेखि नै उल्टिनेवाला छ । संघीयताको कार्यान्वयनसँगै आउँदो वर्षदेखि पुँजीगत खर्चको अनुपात घट्दै जाने र चालू खर्चको अनुपात ह्वात्तै बढने सरकार स्वयंले स्वीकार गरेको छ ।
अर्कातिर चालू आर्थिक वर्ष नै जीडीपीको ६.५ प्रतिशत पुगिसकेको बजेट घटा आउँदो वर्षदेखि अझ उच्चदरले बढ्नेछ । त्यसको असर आर्थिक व्यवस्थापनमा पर्ने नै छ । औपचारिक रूपमा स्वीकार गर्न अलि कस्तो–कस्तो अमिल्दो देखिए पनि नेपालीहरूको आर्थिक समृद्धि भने विस्तारै उकालो चढ्दै गरेको अवस्था हो ।
यो कुरा गरिबीको घट्दो अनुपात र आमनेपालीको बढ्दो प्रतिव्यक्ति खर्चले पनि पुष्टि गर्छ । नेपालको गरिबी विगत दुई दशकमा आधाले घटेको कुरा केवल तथ्यांकीय हेराफेरी होइन, यथार्थमै गरिबीको अनुपात घटेको छ । विगत एक दशकको तथ्यांक हेर्दा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ९० प्रतिशत उपभोगमा सकिन्छ । उपभोग बढ्न आय बढ्नुपर्छ ।
त्यसैले नेपालमा अब गरिबी गणनाका लागि विश्व बैंकका दुवै मानक सहरी क्षेत्रका लागि ३.५० अमेरिकी डलर र ग्रामीण क्षेत्रका लागि १.९० डलरको मानक प्रयोग गरिनुपर्छ ।जब आय बढ्छ, त्यसले आमनागरिकको क्रयशक्ति क्षमता पनि बढाउँछ । यसले आर्थिक प्रणालीमा सकारात्मक प्रभाव पनि पार्छ भन्ने अर्थशास्त्रीय मान्यता छ ।
हाम्रो सन्दर्भमा हेर्दा आमनागरिकको क्रयशक्ति क्षमता बढ्दा त्यसले आर्थिक आधार विस्तार गर्नमा खासै भूमिका खेल्न सकेको भने देखिँदैन, किनकि हाम्रो औद्योगिक क्षमता नै निकै कमजोर छ । जब आन्तरिक उत्पादन कम हुन्छ, स्वभाविक रूपमा आयात उच्च हुन्छ । अहिले देशको आयात जीडीपीको ३७.४ प्रतिशत पुगेको छ ।
यो आउँदा वर्षहरूमा अझै तीव्र दरले बढ्नेछ । चालू आर्थिक वर्षमा व्यापार घाटा जीडीपीको ३४.४ प्रतिशत पुग्ने अनुमान छ । यो हालसम्मकै उच्च अनुपात हो । यसका अन्य प्रतिकूल प्रभाव पनि हुन्छन् ।
तर धन्न मानौं, हाम्रो अर्थतन्त्रलाई रेमिट्यान्सले अहिलेसम्म अन्य प्रतिकूल असरहरूको चक्रमा पर्नबाट जोगाइरहेको छ, जुन देशमा प्रतिव्यक्ति आय तथा समग्र सेवाक्षेत्रको योगदान बढाउने मुख्य तŒव हो ।
अर्थतन्त्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन